Madaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi wuxuu ku baaqayaa feejignaan dheeri ah si loo soo celiyo inta kale ee Yemen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi wuxuu ku baaqayaa feejignaan dheeri ah...
Madaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi wuxuu ku baaqayaa feejignaan dheeri ah si loo soo celiyo inta kale ee Yemen
Madaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi ayaa Sabtidii sheegay in bogga millatariga iyo afgambiga dalkiisa uu noqon doono mid si isdaba joog ah loo laalaabi doono, xarumaha dowladu dib ayaa loo soo celin doonaa, iyo Yemen ayaa si firfircoon uga shaqeyn doonta gobolkeeda iyo caalamkaba.
Tani waxay timid intii lagu jiray kulan ka dhacay Riyadh oo uu la yeeshay Guddoomiyaha Al-Jouf ee Yemen, Sareeye Guud Amiin Al-Akimi.
Hadi wuxuu faray feejignaan dheeri ah, tababar iyo darajo si loo dhameystiro soo celinta inta ka hartay afgambigii Xuutiyiinta ee ay Iran taageertay.
Tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo isbahaysi taageero sharci ah laga siinayo Yemen, weerarro isdaba-joog ah, dibad-baxyo iyo xoojinta maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ku sugan afaafka hore ee Naqra ee huruudda ah ee waqooyiga gobolka Saada, oo ah meesha ugu weyn ee Xuuthiyiinta fog ee waqooyiga Yemen.
Bayaan ay daabacday Xarunta Warbaahinta ee Ciidamada Qalabka Sida ee Yemen ayaa Sabtidii lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ay bartilmaameedsadeen goobaha iyo qalcadaha maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ku sugan Shaj iyo fagaaraha Al Hammad ee degmada Al-Safra, iyagoo tilmaamay in maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay u adeegsadaan goobahan iyo qalcado sidii meel ay isugu yimaadaan, iyagoo abaabulaya xoojinta iyo keydinta hubka. Boodhadh gu’ga lagu weerarayo ciidamada qaranka ee al-Safra.
Ciidanka Yemen, oo ay taageerayaan xoogagga Isbaheysiga ee Taageeridda Sharci Ahaan ee Yemen, ayaa ku hawlan howlo militari ballaaran oo in kabadan sideed xabbadood oo dagaal ah oo ka socda Xuutiyiinta xoogga ku haya agaasimayaasha gobolka Saada.
Previous article“10 Faa’iidooyin oo layaab leh” oo laga helo ‘Dabacasaha’ Inbadan dadka ka mid ah ma yaqaanaan
Next articleHadi calls for more vigilance to restore the rest of Yemen
Netanyahu wuxuu ugu yeeray Erdogan “beenaale”
Mareykanka oo ku baaqey in la dajiyo xiisada Suudaan iyo Itoobiya